Ha la qoro casharrada guriga, bachelor-ka iyo mastarka | Waraaqaha Blog
our Aagga BLOG
La soco wixii ku soo kordha ama raadso waxaad u baahan tahay inaad ka ogaato mowduuca
Qormo-qore, shahaadada bachelor- iyo shahaadada Masterka ha qorto iyo inbadan oo dheeri ah.
Wanaagsan inaad ogaatid
Soo koobid Ingiriis ah
Soo Koobidda Ingiriisiga Qorista luqadaha ajnebiga ahi maaha wax aan cidna ka fikiri karin. Waxaan ku faraxsanahay inaan kaa caawinno turjumaada shaqadaada. Qoraal kooban oo af Ingiriisi ah
19 / 02 / 2021	No Comments
Ha la qoro shaqo cilmiyaysan
Milicsi ha qorto
Hesho milicsiga qoran Xirfadlayaasheena xirfadleyda ah iyo kuwa caqliga badan waxay ku siin doonaan caawimaad deg deg ah, karti iyo tayo sare leh qorista fikirkaaga. Milicsiga - si dhakhso ah
Qor qoraalkaaga bachelor-ka ha u qoro shahaadadaada bachelor-ka aqoon-xirfadeed. Anaga waxaad naga heleysaa caawimaad deg deg ah khibrad, aqoonyahan qoraaga ah. Qoraalka bachelor-ka - naftaada u qor ama qor
16 / 02 / 2021	No Comments
Ha la qoro shaqada mashruuca
Ha loo qoro shaqada mashruuca Wada-shaqeynta kooxeed waa wax soo dhaafay! Aynu diyaarinno mashruucaaga adag iyo shaqada kooxeed. Waxaan kaa caawinaa cilmi baarista, tusaha, waxyaabaha ku jira, bandhigyada ama soo bandhigida
27 / 01 / 2021	No Comments
Qoritaanka Faallo Qorista faallooyinkaagu waxay noqon karaan tan dhakhsaha badan ee fudud! Waxaan muujineynaa sida. Faallada - Sida Loo Saxeexo Saxda Ah! Waxaad leedahay
21 / 01 / 2021	No Comments
Shaqada ha la saxo
Qorayaashayaga cirfiidka waxay leeyihiin khibrada lagama maarmaanka u ah dhanka sixitaanka. Akhrinta iyo tafatirka waa laba hanaan oo kaladuwan oo lagu hagaajinayo qoraalka. Ku
16 / 01 / 2021	No Comments
Ha ku qoro cirfiidka qoraaga warqad erey cilmiyeed
Qoritaanka warqad erey tacliimeed ayaa kula socon doonta inta aad waxbaraneyso. Qaab ka mid ah shaqada guriga ayaa sidoo kale lagu qaadaa magac kale
09 / 07 / 2019	No Comments
Soo iibso shaqada guriga
Ardayda ka qalin jabisay dugsiga sare waxaa loo diyaariyey waxbarashadooda mowduucyo shaqo guri oo adag. Sababtoo ah, gaar ahaan intaad wax baraneyso, waa inaad qortaa shaqooyin badan oo guri-guri ah. Shaqada guriga waa taa
Muddada qoraalka bachelor-ka
1. Kahor intaadan bilaabin qorista shahaadadaada bachelor-ka, waa inaad qabataa shaqo hordhac ah. Kuwani sidoo kale waxay noqon karaan waqti aad u badan. Waqtiga
04 / 07 / 2019	No Comments
Horaantii page1 page2 page3 page4 page5 Xiga »
Wanaagsan inaad ogaatid (50)
Shaqada ayaa bixisa (19)
Ha la qoro shaqo cilmiyaysan (38)